‘अण्डरवर्ल्ड डन’ दाउद इब्राहिमको कोरोनाबाट नि`धन ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/‘अण्डरवर्ल्ड डन’ दाउद इब्राहिमको कोरोनाबाट नि`धन !
एजेन्सी । भारतमा फैलिएको कोरोनाका कारण एक अण्ड`रवल्र्ड ड’नको निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारत स्थित मुम्बई ह’मलाका मुख्य योजनाकार मानिएका ‘अण्डरवर्ल्ड ड’न’ दाउद ईब्राहिमको कोरोनाका कारण निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन् । सो समाचार अहिले भारतमा भाइरल भइरहेको छ । तर त्यसको आधिका`रीकता पु`ष्टि हुने कुनै आधार भने फेला परेको छैन ।
सञ्चार माध्यमका यस्तो खबर आइरहँदा उनका भाईले भने त्यो समाचारको खण्डन गरेका छन् । उनका भाई अनिश इब्राहिले दाउद इब्राहिम सहित परिवारका कुनै पनि सदस्यमा कोरोना नभएको दावी गर्दै समाचा`रको ख`ण्डन गरेका हुन् । तर उनको परिवारका सदस्य कोरोना संक्रमित भएको भन्दै शुक्रवार नै समाचार वाहिरिएको थियो । इब्राहिम दम्पत्ती नै कोरोना संक्रमित भएको दावी समा`चारमा गरिएको थियो ।
भारतका हिन्दी तथा थुप्रै अंग्रेजी अनलाईनहरु,भारतीय टेलिभिजनहरु,पाकिस्तानी टेलिभिजनहरु लगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि यतिबेला यो खबरले निक्कै धेरै स्थान पाएको छ । कोरोना संक्रमित भए लगत्तै दाउद दम्पतीलाई पाकिस्तानको कराँचीस्थित आर्मी हस्पिटलमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको बताइको थियो । सन् १९९३ मा भएको मुम्बई ह’मलाका मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै भारतले उनलाई सन् २००३ मा ग्लोबल टे’रेरिस्ट घोषणा गरेको थियो ।